Toriteny Alahady 04 Septambra 2016 | FJKM Amboniloha
Toriteny Alahady 04 Septambra 2016
“Manambara ny asan’ ny Tompo ny mino »
I Tantara 16,8-14 / Lioka 8,43-48 / Asan’ny Apostoly 12,11-17
Ataon’i satana avokoa izay hevitra rehetra hangejana ny Kristina mba tsy ahazoantsika mandova ny fiainana mandrakizay.
Apoitrany ny olana saro-bahana samihafa eo amin’ny fianakaviana, sy fiaraha-minona, ny asa ary indrindra ny sehatry ny fanompoana, alefany aretina ka ireny no miteraka fahakiviana hampiraviravy tanana ny Kristiana.
N’inona n’inona zava-tsarotra miseho, Jesoa Kristy efa mijoro hamaha ny famatoran’ny fahafatesana eo amin’ny fiainanao. Manasa anao hanaraka ny toro marika avy amin’ny Tenin’Andriamanitra hanamarina fa vonona hiasa ary efa miasa eo amin’ny fiananao ny Tompo.
Lesona 1 : I Tantara 16, 8 – 14
Na dia nisy aza ny ady anatiny (tsy fitovian-kevitra) sy ivelany (Filistina) tsy maintsy natrehan’i Davida ny amin’ny hitondrana ny fiaran’ny faneken’ I Jehovah eo amin’ny Tempoly, nozarainy tsara ny andraikitra napetraka taminy. Vokany nivoaka ho mpandresy izy ary nanao hira fiderana.
Tazony tsara izay andraikitra napetraka taminao ary tanteraho amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra izany mba hanehoana ny voninahiny.
Lesona 2 : Lioka 8, 43 – 48
Nandany ny fananany rehetra tamin’ny mpanao fanafody ravehivavy nitsi-drà nandritra ny 12 taona, ny fanakaikezany an’i Jesoa no hitany ho vaha olana ho amin’ny fanasitranana azy. Vokany, afaka tamin’ny aretiny izy.
Ny fifandraisana akaiky amin’i Jesoa mahatonga herin’ny Fanahy Masina hiasa ao anatinao hanadraisanao ny fandresena amin’ny ady sarotra rehetra. Tazony ny finoanao an’i Jesoa ao anatinao.
Lesona 3 : Asan’ny Apostoly 12, 11 – 17
Raha tao am-ponja i Petera dia tsy nijanona nivavaka ho azy ny Kristiana, raha ny rariny amin’ny maha olombelona dia tsy misy hirika ahafahany mivoaka mihitsy, nefa ny anjelin’Andriamanitra no nirahiny hanafaka ny mpanompony tamin’ny gadra.
Tsarovy am-bavaka izay rehetra manana ady sarotra amin’ny fiainany. Fa raha misy roa na telo mifanaiky fa hangataka zavatra amin’ny anaran’I Jesoa dia ho azony avy amin’ny Ray izay any an-danitra izany.
Mahereza ary manoloana ny ady sarotra atrehintsika amin’ny endriny maro samihafa, fa manana hevitra hiheverana antsika Andriamanitra dia hevitra hitondra ho amin’ny fiadanana fa tsy loza.
Tsy maintsy mivoaka ho mpandresy izay manana an’I Jesoa Kristy ao anatiny.
ANDRIANARISOA Hajaniana Célestin, Mpitandrina
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 7 septembre 2016